Kedu ka ihe mmetụta PIR si arụ ọrụ yana kedu uru ọ bara?
Kedu ka ihe mmetụta PIR si arụ ọrụ yana kedu uru ọ bara? Bịa hụ!
Ụkpụrụ ọrụ nke ihe mmetụta mmegharị PIR
A na-akpọkwa mgba ọkụ induction nke ahụ mmadụ pyrolysis induction mgba ọkụ ma ọ bụ infrared nwere ọgụgụ isi mgba ọkụ. Ihe infrared induction element bụ ihe pyroelectric. Mgbe ike nke infrared radieshon ọ na-enweta site na ahụ mmadụ gbanwere, ọ na-efunahụ nguzozi ụgwọ ya wee malite ịhapụ ugbu a.
Mgbe mmadụ na-abanye n'ókè nke nghọta, ihe mmetụta pụrụ iche na-achọpụta mgbanwe nke ụdị infrared nke ahụ mmadụ ma gbanye ya ozugbo. Ndị mmadụ anaghị ahapụ oke nghọta, ọ ga-aga n'ihu ijikọ. Mgbe onye ahụ pụọ, igbu oge na-agbanyụ ibu ahụ ozugbo.
A na-ejikarị mgba ọkụ induction ahụ mmadụ eme ihe n'ọtụtụ ebe ọha na eze dị ka steepụ, ụzọ ije, ụlọ mposi, igwe mbuli, wdg.
Uru nke onye na-ahụ maka ọkụ n'okporo ámá anyanwụ nwere ihe mmetụta ngagharị PIR
1. PIR anụ ahụ mmadụ induction ọkụ anyanwụ na-anabata, nchekwa ike na enyi na gburugburu ebe obibi. Mgbe abalị dara, ọkụ na-adanyụ ma na-agbanye na-akpaghị aka mgbe ọ chọpụtara na mmadụ na-agagharị n'ime oke nghọta. Ọ bụrụ na onye ahụ na-aga n'ihu na-agagharị n'ime oke ya, ọkụ ọkụ ahụ mmadụ LED ga-adị mgbe niile. Mgbe ahụ mmadụ na-apụ ma ọ bụ kwụsị ịkwagharị, ọ ga-agbanyụ ma ọ kwụsịtụrụ. Ọ dịghị mgbanwe ntuziaka a chọrọ na usoro a, nke na-enwekwu enyi na gburugburu ebe obibi na enweghị mkpọtụ. Ọ naghị ewepụta ụdị radieshon n'onwe ya yana ọ na-emekọrịta ihe na gburugburu ebe obibi.
2. PIR ahụ mmadụ induction ọkụ anyanwụ na-arụ ọrụ nke ọma na-echekwa ike, na-enwe ogologo ndụ na arụmọrụ kwụsiri ike. N'ihi na oriọna ya ga-agbanyụ na-akpaghị aka ma ndị mmadụ pụọ, ọ nwere ike na-arụ ọrụ nke ọma. Na ike oriri nke ngwaọrụ dị ntakịrị na ndụ ọrụ dị ogologo.